Iwu nyocha - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Nyocha na mmepe
XY Tower elebara anya nke ukwuu na nyocha na mmepe nke ngwaahịa ma na-arapara na ya dị ka ụkpụrụ dị ogologo oge. XY Tower na-etinye ego ego kwa afọ nke ego ya na R&D wee nweta akwụkwọ “ụlọ ọrụ teknụzụ dị obere na nke obere na nke ọkara” nke gọọmentị ime obodo nyere.
N'ịbụ ndị iwu nke ihe ọhụrụ na mmelite mma kpaliri, ngalaba R&D ejiriwo ụlọ nyocha ọgbara ọhụrụ na-enyere aka ịrụ ọrụ R&D dị iche iche.
Ngalaba R & D na-arụ ọrụ na echiche ọhụrụ na azịza anyị kwenyere na-abawanye na ụlọ ọrụ a na nke etinyere n'ọtụtụ ngwaahịa anyị.
Ndi otu R & D guzobere nke ndi injinia nke ulo oru na ndị anyị na ha na-arụkọ ọrụ dịka mahadum na ụlọ ọrụ nyocha. Ndị otu R & D na-eme ọmụmụ kpụ ọkụ n'ọnụ iji kpokọta nghọta banyere ụlọ ọrụ eletriki na mmepe nke na-ewere ọnọdụ n'ọhịa nke, elu igwe dị elu, ụlọ elu nnyefe, ụlọ elu telecom, akụkụ ihe owuwu na ngwa igwe. A na-edekọ ma nyochaa data anakọtara na nyocha ahụ ka enwere ike iji ya maka mmepe ngwaahịa ma ọ bụ naanị maka ntụnye.
Ikike nchọpụta anyị nwetara
Nke sitere na iguzosi ike n'ezi ihe
UCC na-etinye ego ego kwa afọ nke ego ha nwetara na mmemme R&D na -emepụta ngwaahịa mbepụ na ngwọta asọmpi na ọkwa mba ụwa. Site na oru ya emeputara, ikike ikike mba ofesi edebanyere aha ya, wepụtara azịza dị elu yana nsonye ya, oge ụfọdụ dị ka onye ndu ibe ya.